မြန်မာအကကို ကြည်ရှု့သူတွေ မျက်နှာ မလွှဲအောင် ကပြတတ် မှုကြောင့် နာမည်ကြီး နေတဲ့ ဆရာမလေး(ဗွီဒီယို) – Zartiman
ဆရာမခိုင်မာ လွင်ကတော့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်က ဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြန်မာရိုးရာအကဗွီဒီယိုလေး ရိုက်ကာ လူမှုကွန် ရက်မှာ မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ မြန်မာအကဆို ပျင်းစရာကြီးလို့ သတ်မှတ် ထားကြသူတွေတောင် ဆရာမရဲ့ အချိုးအစား ကျကျ ကတတ်မှု၊ မျက်နှာအမူအရာလေးတွေကြောင့် ကြည့်ရှုသူတော်တော်များများ သဘောကျကာ ဝန်းရံ အားပေးမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေ…. မြန်မာအကတွေကို တန်ဖိုးထားလေးစားသလို နောက်မျိုးဆက် တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေပေးနေတဲ့ ဆ ရာမခိုင်မာလွင်ရဲ့ ကြည့်ရှုသူ တစ်သန်းနီးပါးအားပေးခဲ့တဲ့ အကဗွီဒီယိုလေးကို ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါး ယဉ်ကျေး မှုတွေ အများဆုံး စိမ့်ဝင် လာတဲ့ နှစ်ဆယ့် တစ်ရာစု ခေတ်ကြီး ထဲမှာ။
ခေတ်ပေါ်အကတွေကို စိတ်ဝင်တစား သင်ယူနေသူတွေများ လာပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကတွေကို စိတ်ဝင်တစား သင်ယူမယ့် သူတွေကတော့ တဖြည်းဖြည်းရှားလာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ် ပညာရေးစနစ်အရ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေမှာ အခြေခံ က ဗျာလွတ်အက နဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကတွေကို သင်ကြားဖို့ သတ်မှတ်လိုက် တာကတော့ တကယ်ကို ဝမ်းသာစရာပါ။
မြန်မာအကကို တကယ်တတ်ကျွမ်းလိမ္မာစွာ ကတတ်သူတွေရှား လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ မြန်မာ အကတွေ နဲ့ နာမည်ကြီး လာသူကတော့ ဆရာမခိုင်မာလွင်ပါ။
ဆရာမခိုငျမာ လှငျကတော့ အမြိုးသားယဉျကြေးမှုတက်ကသိုလျက ဆရာမတဈဦး ဖွဈပွီး မွနျမာရိုးရာအကဗှီဒီယိုလေး ရိုကျကာ လူမှုကှနျ ရကျမှာ မြှဝလေရှေိ့သူပါ။ မွနျမာအကဆို ပငျြးစရာကွီးလို့ သတျမှတျ ထားကွသူတှတေောငျ ဆရာမရဲ့ အခြိုးအစား ကကြ ကတတျမှု၊ မကျြနှာအမူအရာလေးတှကွေောငျ့ ကွညျ့ရှုသူတျောတျောမြားမြား သဘောကကြာ ဝနျးရံ အားပေးမှုရရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
ပရိသတျကွီးရေ…. မွနျမာအကတှကေို တနျဖိုးထားလေးစားသလို နောကျမြိုးဆကျ တှကေို လကျဆငျ့ကမျးပွနျလညျမြှဝပေေးနတေဲ့ ဆ ရာမခိုငျမာလှငျရဲ့ ကွညျ့ရှုသူ တဈသနျးနီးပါးအားပေးခဲ့တဲ့ အကဗှီဒီယိုလေးကို ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျပါတယျ။တိုငျးတဈပါး ယဉျကြေး မှုတှေ အမြားဆုံး စိမျ့ဝငျ လာတဲ့ နှဈဆယျ့ တဈရာစု ခတျေကွီး ထဲမှာ။
ခတျေပျေါအကတှကေို စိတျဝငျတစား သငျယူနသေူတှမြေား လာပမေယျ့ မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှုအကတှကေို စိတျဝငျတစား သငျယူမယျ့ သူတှကေတော့ တဖွညျးဖွညျးရှားလာပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။ဒါပမေယျ့ ခတျေသဈ ပညာရေးစနဈအရ အခွခေံပညာ ကြောငျးတှမှော အခွခေံ က ဗြာလှတျအက နဲ့ မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှု အကတှကေို သငျကွားဖို့ သတျမှတျလိုကျ တာကတော့ တကယျကို ဝမျးသာစရာပါ။
မွနျမာအကကို တကယျတတျကြှမျးလိမ်မာစှာ ကတတျသူတှရှေား လာတဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာတော့ လတျတလော လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ မွနျမာ အကတှေ နဲ့ နာမညျကွီး လာသူကတော့ ဆရာမခိုငျမာလှငျပါ။
ပုရိသတွေ မနေနိုင်အောင် အမိုက်စားပြကွက်လေးနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ စုမြတ်ဖူးရဲ့ ဗီဒီယို
ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ အမိုက်စားဂေါ် နေတဲ့ အိချောပို ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ရင်ဖိုသွားစေမယ့် သီရိရှင်းသန့်ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို